Gore rekupedzisira rave riri rinoshamisa gore kwandiri nebhizinesi rangu. Iko kutarisisa uye kutarisisa kune vatengi vangu zvave zvichibereka uye ini ndinotenda zvikuru nekuda kwevanoshamisa vatengi vandinawo! Dambudziko randakaita nebasa rake rekuyera (iro randinoda) nehutano (izvo zvandisina hanya nazvo). Pamusoro pegore rapfuura, kukuvara pamwe chete netsika dzakaipa zvakasimudzira marara angu kusvika padanho uye zvakandirwadza. Yakanga iri nguva yekuburitsa uye
MuIndianapolis, kune chaiko kufamba mune yekushambadzira tekinoroji nzvimbo pamwe nekukura kwenhamba yemari yeHighAlpha - iyo yakazvarwa kunze kweExpactTarget. Isu takagovana nezve imwe yekambani idzi, Quantifi, uye vakabvunzurudza CEO RJ Talyor pane yedu Martech Kubvunzana nhevedzano. Vhiki rino, podcast nyanzvi Liz Prugh wePure Fandom mukurumbira uye RJ akafunga kundibvunzurudza podcast yavo, Iyo Nyowani Chinhu! Iyo basa reiyo Nyowani Nyowani Chinhu: Yedu